आज पुष ३ गते शनिबार ,शुभ-अशुभ कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् आजको राशिफल ! – Hamro Nepali Samachar
Home/ राशिफल/आज पुष ३ गते शनिबार ,शुभ-अशुभ कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् आजको राशिफल !
सामाजिक र सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रसिद्धि मिल्नेछ । परिवार एवम् दाम्पत्यजीवनमा सुख- सन्तोष अनुभव होला। रोमान्सको पराकाष्ठा अनुभव होला । मोज-मस्ती र मनोरंजनबाट लाभ होला। जीवनसाथीसँग मेलमिलाप होला।
बोली र व्यवहारमा ध्यान राख्नुहोला। कसैसँग मजाक नगर्नुहोला। मोज-शोक तथा मनोरंजनमा खर्च होला। स्वास्थ्यको विशेष ध्यान राख्नुहोला। दुर्घटनाबाट बच्नुहोला। मानसिक उन्मत्तताको कारण समस्या उत्पन्न होला।
तपाईलाई सर्वत्र लाभ नै लाभ होला। पारिवारिक सुख-शान्ति बनिरहनेछ। अविवाहित व्यक्तिसँग विवाह होला। व्यापार एवम् पेसामा आय बढ्नेछ। घरमा शुभ प्रसंगको आयोजन हुनेछ। प्रिजनसँग भेट आनन्ददायक होला। उत्तम भोजन र उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त होला।
शारीरिक वा मानसिक स्वस्थताको अभाव होला। छातीमा पीडा वा अन्य कुनै विकारबाट समस्या अनुभव होला। परिवारमा सदस्यसँग उग्र वाद-विवाद होला। स्त्री वर्ग तथा पानीबाट समस्या हुन सक्ला। पैसा खर्च हुनेछ। समयमा भोजन मिल्नेछैन।
तपाई तन -मनबाट स्वस्थ र प्रफुल्लित रहनुहुन्छ। भाग्यवृद्दिको लागि अवसर प्राप्त होला। निर्धारित कार्य पूरा होला। छोटो यात्रा हुने योग छ। आर्थिक लाभ होला। प्रतिस्पर्धीले विजय प्राप्त गर्नेछ।
दुविधापूर्ण मानसिक वृत्ति रहनेछ। नकरात्मक विचारले मनको अस्वस्थता बढाउनेछ। पारिवारिक सदस्यसँग गलत धारणा हुन सक्ला। अनावश्यक खर्च हुन सक्ला। विधार्थीको पढाईमा मन लाग्नेछैन। बौद्धिक चर्चाको क्रममा विवादबाट बच्नुहोला।
वर्तमान समयमा राम्रोसँग आर्थिक आयोजन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको कलात्मक र सिर्जनात्मक शक्ति श्रेष्ठतम रहनेछ। शारीरिक र मानसिक रूपबाट तंदुरुस्त रहनुहुन्छ। दृढ विचार र आत्मविश्वासबाट कार्य पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। मोज -शोक र मनोरंजनमा पैसा खर्च होला।
विदेशमा बस्ने आफन्त वा मित्रको तर्फबाट शुभ समाचार मिल्ने योग छ। दाम्पत्यजीवन जीवनसाथीसँग निकट पल बिताउनु हुन्छ। अदालती मामिलामा सम्हालेर रहनुहोला। अफिसमा स्त्री वर्गबाट लाभ होला।
प्रेमको सुखद अनुभव प्राप्त गर्ने सौभाग्य प्राप्त होला। आर्थिक, सामाजिक र कुटुम्बिक दृष्टिले लाभदायक दिन छ। घरायसी जीवनमा आनन्द छाईरहनेछ। मित्र, विशेष रूपबाट स्त्री मित्रोबाट लाभ तथा यात्राको आयोजन होला। आयको साधना वृद्धि होला। व्यापारमा वृद्धि र लाभ हुनेछ।
मकर राशि – भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि (Capricorn) :धन, मान एवम् प्रतिष्ठा वृद्धि होला। घर, परिवार र सन्तानको मामिलामा आनन्द र सन्तोष अनुभव गर्नुहुन्छ। व्यवसायिक कार्यको सम्बन्धमा दौडधुप बढ्नेछ। सरकारी कार्यमा सफलता मिल्नेछ र सरकार तथा मित्रो र आफन्तबाट लाभ होला।
तपाईले अस्वस्थ अनुभव गर्नुहुन्छ तर मानसिक रुपले स्वस्थ रहनुहुन्छ। काम गर्दा उत्साहको अभाव रहनेछ। अफिसमा उच्च पदाधिकारीसँग बचेर रहनुहोला। विदेशगमन हुने योग छ। सन्तानको चिन्ता रहनेछ।
आकस्मिक धन लाभ हुने योग छ। शारीरिक र मानसिक रूपले अधिक परिश्रम गर्नुपर्नेछ। स्वास्थ्यको मामिलामा ध्यान राख्नुहोला। अधिक खर्च हुनेछ। अ अनैतिक कामवृत्तिबाट टाढा रहनुहोला। आध्यात्मिक विचार र व्यवहारको कारण कुमार्गमा जानबाट रोकिनुहुन्छ।